‘फी बेस’ आम्दानी बढाए ब्याजदर घट्न सक्छ - Karobar National Economic Daily
‘फी बेस’ आम्दानी बढाए ब्याजदर घट्न सक्छ
query_builderAugust 7, 2017 9:52 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1519
अनुजमणि तिमिल्सिना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक
अर्थतन्त्रको मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्न बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिना बताउँछन् ।
सेञ्चुरी बैंकले पनि छुट्टै सेल स्थापना गरेर कृषिमा लगानी गर्ने तयारी गरेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । हिमालयन बैंकदेखि आफ्नो बैंकिङ करिअर सुरु गरेका तिमिल्सिना नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक हँुदै सञ्चुरी पुगेका हुन् ।
सेञ्चुरीमा डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको करिब तीन वर्ष भएको छ । शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका तिमिल्सिनाले दुई दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको निक्षेप आउन थालेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारी खर्च बढेकाले दोहोरो अंकमा निक्षेप अफर गरिरहेका बैंकहरूले ब्याजदर केही कम गरेको भए पनि समग्र ब्याजदर घट्न अझै समय लाग्ने उनको तर्क छ । बैंकहरूको पुँजीगत आधार बढेपछि आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने पनि रहेको बताउने तिमिल्सिना बैंकहरूसँग तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो अवस्था भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएको तर्क गर्छन् ।
सरकारी खर्च बढेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियोमा दिएको सहजता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै अन्तिम हुने बताउने तिमिल्सिनासँग सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको अवस्था तथा नयाँ योजना र समग्र वित्तीय प्रणालीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई ८ अर्ब पुँजी पु-याउन गाह्रो परेको अवस्था हो ?
केन्द्रीय बैंकले दिएको समयको सुरु–सुरुमा सेञ्चुरी बैंकको पुँजी वृद्धिको गति कम भएको भन्ने सन्देश बजारमा थियो । समय बित्दै जाँदा हामीले इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति ग-यौं ।
त्यसैगरी सगरमाथा फाइनान्सलाई पनि प्राप्ति गरेर आजको दिन बैंकको चुक्ता पुँजी करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पु-याएका छौं । त्यसमा पनि हामीले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरिरहेका छौं । त्यो हकप्रद सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यसपछि हामीले सेती फाइनान्स र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक लिँदै छौं ।
त्यो दुई संस्थाको करिब ५० करोड रुपैयाँ आउनेछ । यी २ संस्था पनि प्राप्तिको काम सकेर आगामी असोज मसान्तसम्ममा संयुक्त कारोबार सुरु गरिसक्छौं । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु-याउन हामीलाई समस्या छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब पुँजी पु-याउन गाह थियो । तर, केन्द्रीय बैंक लचक भइदिएकाले सबैले पुँजी पु¥याउने अवसर पाए भन्नुपर्छ । मेरो विचारमा असोज मसान्तसम्ममा सबै बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढेको देखिन्छ, निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार हुने अवस्था देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?
यस विषयमा कुरा गर्दा आजको दिनमा भन्ने हो भने सेञ्चुरी बैंकसँग करिब डेढ अर्बको तरलता छ । तर, तरलता अधिक भए पनि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) टाइट छ । हाल सेञ्चुरी बैंकको सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत छ ।
बैंकको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हो । पूर्ण रूपमा सीसीडी रेसियोमा कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने करिब ७० देखि ८० करोडको लगानी गर्न सकिन्छ । तर, त्यो अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिँदैन । सीसीडी रेसियोमा पनि केही अन्तर त चाहिन्छ । त्यसैले आजको दिनमा मैले दिन सक्ने कर्जा भनेको ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ मात्र हो ।
केन्द्रीय बैंक लचक भइदिएकाले सबैले पुँजी पु¥याउने अवसर पाए भन्नुपर्छ । मेरो विचारमा असोज मसान्तसम्ममा सबै बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
किनभने सीसीडी रेसियोमा जहिले पनि केही मार्जिन लिएर बस्नुपर्छ । सेञ्चुरी बैंकको यो अवस्था भनेको केन्द्रीय बैंकले दिएको सीसीडी रेसियोमा दिएको सुविधालाई गणना नगरेको अवस्था हो । त्यो गणना गरेको खण्डमा बैंकले लगानी गर्न सक्छ । तर, त्यो सुविधा पनि असोज मसान्तपछि हँुदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तपछि सीसीडी रेसियोको सुविधा नहुने भनेको छ । तर, बैंकहरू भने पुनः सीसीडी गणनामा सहुलियत दिनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले पुनः दिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले खर्च गरेकाले नै वित्तीय प्रणालीमा पैसा आएको हो । समयमै सरकारी खर्च भएमा सीसीडी रेसियोको समस्या बैंकहरूलाई पर्छ भन्ने लाग्दैन । यसको मुख्य कुरा भनेको सरकारले समयमा खर्च गरेर वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउनुपर्छ । आगामी १ देखि २ महिनासम्म समस्या रहन सक्छ ।
आगामी दोस्रो त्रैमासको पहिलो महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा फन्ड आउने सम्भावना धेरै छ । त्यसमा अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक नै छन् । सबै संस्था नयाँ आर्थिक वर्षसँगै आक्रामक भएर लगानी गर्ने योजनामा हुन्छन् । तर, निक्षेप सीमित भएकाले सबै बैंक–वित्तीय संस्थाले निक्षेप तानातान गर्दा निक्षेपको हाहाकार हुन सक्छ कि भन्ने हो ।
बैंक–वित्तीय संस्थामा थपिएको लगानीअनुसारको व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?
जुन तवरबाट पुँजीगत आधार बढेको छ । त्योअनुसारको व्यवसाय विस्तारका लागि बैंक–वित्तीय संस्थालाई चुनौतीपूर्ण छ । वाणिज्य बैंकहरूले २ अर्बको चुक्ता पुँजीबाट ८ अर्ब पु¥याएका छन् । सोही अनुपातमा व्यवसाय विस्तार त हँुदैन ।
त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक–डेढ वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ । मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदरअनुसारको प्रतिफल पनि बैंक–वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा आउने सम्भावना कम छ । तर, एक वर्ष पछि भने राम्रो प्रतिफल आउछ ।
तपाईंहरूले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ २० प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । यो सम्भव छ त ?
हाल देखिएको कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या कति छिटो समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको पहिलो महिनादेखि यो समस्या समाधानउन्मुख हुन्छ । यो समस्या समाधान भएपछि बैंकहरूले लगानी विस्तार गरी आम्दानी गरेर प्रतिफल पनि दिन सक्ने सम्भावना छ । तर, बैंक–वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा लगानी गर्नका लागि फन्डको स्रोत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ७.२ को आर्थिक वृद्धिको बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भाव हुँदैन कि ।
आक्रामक व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरूलाई आक्रामक निक्षेप चाहिन्छ । त्यो अनुसारमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको कर्पोरेट क्षेत्रको हो । त्यो क्षेत्रमा हामीले सोचेजस्तो गरी कर्जा जान्छ । तर, त्यसका लागि सोही क्षेत्रबाट निक्षेप पनि आक्रामक आउनुपर्छ ।
यसमा भन्नुपर्दा कर्पोरेट निक्षेप कर्पोरेट लगानी, रिटेल निक्षेप रिटेल लगानी हो । कर्पोरेट क्षेत्रमा आक्रामक लगानी गर्नका लागि कर्पोरेट निक्षेप चाहियो । कर्पोरेट निक्षेप भनेको संस्थागत निक्षेप हो । संस्थागत निक्षेपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिलिङ लगाइदिएको छ । बैंकले संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत मात्र लिन पाउँछन् । त्यसले गर्दा बैंकहरूले चाहेअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले २० प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य गाह«ो छ ।
भनेपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने भयो नि ?
अहिलेको अवस्थामा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउने, संस्थागत निक्षेप ४५ प्रशितमा झर्ने र २० प्रतिशतको निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण नै छ । यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष ७.२ को आर्थिक वृद्धिको बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भाव हुँदैन कि ।
चुक्ता पुँजी बढाएको अनुपातमा बैंक–वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाएपछि आम्दानीका अन्य स्रोतको खोजीमा बैंकहरू देखिएका हुन् ?
बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिलाई नै बढाएर आम्दानी गर्छु भन्दा जोखिम धेरै देखिन्छ । बैंकहरूले जोखिम बढाएर भन्दा पनि ‘फी बेस’ आम्दानीका अन्य स्रोतहरू पनि खोज्नु जरुरी छ । बैंकलाई ब्याज आम्दानी त छँदै छ ।
त्यसबाहेक अन्य आम्दानीअन्तर्गत ट्रेजरीको आम्दानी, कमिसन आम्दानी, क्रेडिट कार्डबाट, प्रतीतपत्र जारी गर्दा, ड्राफ्टबाट, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गरेर लगायतका क्षेत्रबाट आम्दानी हुन सक्छ । त्योबाहेक प्रविधिमा आधारित पनि आम्दानीका स्रोत छन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले अन्य आम्दनीका क्षेत्रहरू खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।
समयमै सरकारी खर्च भएमा सीसीडी रेसियोको समस्या बैंकहरूलाई पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
त्यसका साथै बैंकले सेवाशुल्क लिनुपर्छ । बैंकले दिने सेवामा पनि खर्च छ । सेवाशुल्कअनुसारको सेवा हुनुपर्छ । बैंकको दायित्व भनेको आर्थिक विकासमा पनि योगदान दिने हो । बैंकहरूले सेवा शुल्क लिएको खण्डमा ब्याजदर कम हुन्थ्यो कि भन्ने छ । ब्याजदर घटेको खण्डमा आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।
बैंकले सुहाउँदो खालको सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्छ । शुल्कअनुसारको सेवा दिएको छ÷छैन भन्ने विषयमा नियामक निकायले मनिटर गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले अन्य आम्दानीका स्रोतभन्दा पनि ब्याज आम्दानीमै फोकस भएकाले ब्याजदर माथि गएको हो ।
पछिल्लो समयमा उच्च दरले बढेको ब्याजदर तत्काल नियन्त्रण हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सरकारी खर्चमा बैंकहरू भर परेका छन् । यो वर्षको सुरुमा केही खर्च बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा पैसा आएको देखिन्छ । तर, हालको तरलताले पुगेको छैन । मार्केटमा अझै पैसा आउनुपर्छ । आजभन्दा एक महिनाअघि १४ प्रतिशतभन्दा माथि गएको निक्षेपको ब्याजदर आज १४ भन्दा तल नै अलमलिरहेको छ ।
त्यसैले पनि ब्याजदर बढ्ने गतिमा देखिँदैन । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर त घटिसकेको छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत निक्षेपमा पनि १० देखि ११ को हाराहारीमा आएको छ । बैंकिङ प्रणालीलाई आवश्यक पैसा नआएकाले बैंक रेट नघटेको हो । प्रणालीमा पैसा आएको खण्डमा बैंक रेट घट्छ ।
बैंकहरू सधंै सरकारी खर्चलाई नै पर्खेर बसेको देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढाउन अरू विकल्प छैनन् ?
सरकारी खर्च तथा रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीमा आउने पैसाको मुख्य स्रोत मानिँदै आएको छ । त्यसमा व्यक्तिगत निक्षेप र संस्थागत निक्षेप छन् । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घट्दो छ ।
सरकारी खर्च गरेको खण्डमा नै व्यक्तिको खल्तीमा पैसा आउँछ । व्यक्तिलाई पैसा आएपछि न बैंकमा पैसा आउँछ । केही दिनअघिसम्म ११ सम्म माग्दा नपाएको निक्षेप तिनै व्यक्ति आज १० वा ९.५ सम्म दिन तयार भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक–डेढ वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।
यसले वित्तीय प्रणालीका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अर्को पक्ष के भन्दा विगतका वर्षहरूमा बचत धेरै मुद्दती थोरै थियो । तर, पछिल्लो समयमा मुद्दती निक्षेप धेरै, बचत थोरै छ । मुद्दती धेरै भएकाले तत्काल रेट घट्दैन कि भन्ने हो ।
पुँजी वृद्धिले संस्थागत अवस्था त बलियो भयो । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर गर्न सक्छन् भन्छन् नि ?
बैंकहरूले चार गुणासम्म पुँजी बढाएका छन् । त्यो अनुसारको आम्दानीका लागि आक्रामक लगानी गर्नुपर्छ । आक्रामक लगानी गर्दा कहीं गएर दुर्घटना आउन सक्छ भन्ने हो । यसको सम्भावना पनि छ ।
यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत भएर आक्रामक लगानीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाएको हुन सक्छ । संस्थागत निक्षेपमा सीमा लगाएपछि आक्रामक लगानी नहोला । त्यसैले ठूलो दुर्घटना नहोला ।
स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा विस्तार गर्ने विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
यो सकारात्मक कुरा हो । स्थानीय तहको विषयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ६ स्थानमा शाखा खोल्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी जान्छौं पनि । तर, बंैकहरू जान चाहेर मात्र भएन । त्यो क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार पनि हुुनुपर्छ । बाटो, बत्तीलगायतका पूर्वाधार भएनन् भने हामी गएर मात्र पनि धेरै गाह«ो हुन्छ । केन्द्रीय बैंक पनि बैंकिङ पहँुच विस्तार गर्ने पक्षमा छ ।
पछिल्लो समयमा केही संस्था प्राप्त पनि गर्नुभएको छ, मर्जर कत्तिको सहज रहेछ त ?
हामीलाई मर्जरभन्दा अघिको प्रक्रियामा समस्या आएन । मर्जर भएर संयुक्त काम सुरु गरेपछि केही समस्या देखिए । हामी मर्जरमा जाँदा सिस्टम इन्टिग्रेसन गर्दा समस्या भएन, कर्मचारी समायोजनमा पनि समस्या आएन, तर संस्कारका कारण समस्या हुँदो रहेछ ।
स्थानीय तहको विषयमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ६ स्थानमा शाखा खोल्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी जान्छौं पनि ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संस्कार वाणिज्य बैंकसँग मिल्दो रहेनछ । त्यसका लागि समिति बनाएर प्रशिक्षण गर्ने काम गरिरहेको छौं । संस्थाअनुसारको सेवा हुने भएकाले संस्कारमा फरक परेको हो । कर्मचारीहरू दक्ष हुनुहुन्छ । तर, संस्कारमा केही दुविधा देखएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको छ, तपाईंहरू कसरी लगानी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
सेञ्चुरीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बैंकले छुट्टै सेल बनाएर लगानी गर्दै आएको छ । त्यसमा सिनियर म्यानेजर लेभलका मानिसले नेतृत्व गरेर काम अघि बढाउनुभएको छ । हाम्रो टिममा कृषिसम्बन्धी जानकार मानिस धेरै भएकाले पनि सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
बैंकरहरूले बुझेको छैन भनेर लगानी नै रोकिन्छ भन्ने होइन । दक्ष जनशक्ति हायर गरेर पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले तोकेको १० प्रतिशत पूरा हुने सम्भावना भने कम छ ।
बैंक तत्काल आक्रामक रूपमा लगानी गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा छैन । हामीले समयअनुसार व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्दै जान्छौं । हामीले शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छौं । अब बैंक पश्चिम क्षेत्रमा धेरै फोकस हुन्छ । त्यसका साथै आगामी दिनमा अन्य आम्दानी पनि बढाउनुपर्ने छ ।
त्यसका लागि क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छौं । हाम्रो रणनीतिअनुसारको ग्रोथ गर्ने योजनामा छौं । हाल बैंकले ६६ शाखामार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बाँकी २ वित्तीय संस्था पनि प्राप्त गरेपछि ८३ शाखा संख्या हुन्छन् ।
सीसीडी रेसियोमा जहिले पनि केही मार्जिन लिएर बस्नुपर्छ ।
त्यसका साथै ६ वटा शाखा स्थानीय तहमा खोल्नुपर्ने हुँदा करिब १ सय शाखामार्फत बैंकिङ सेवा दिएका छौं । हाल ६ सय ५० कर्मचारी छन् । त्यसका साथै ३५ वटा एटीएम काउन्टर छन् । सेञ्चुरी बैंकमा मैले काम सुरु गर्दा पोर्टफोलियो ९ अर्बको थियो । अहिले करिब ४१ अर्बको पोर्टफोलियो छ । त्यो बेला ६ करोड खुद नाफा गरेको बैंकले गत वर्ष ४१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंक सेयर अर्थतन्त्र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सेञ्चुरी बैंक